Ukusebenza kweSanex Natur Protect entsha | Amadoda aSitayela
Ukusebenza kweSanex Natur Protect entsha
Yiba nekilasi | | Ukunakekelwa komuntu siqu
Ukuhlola isidephunga esivivinyweni, isikhathi esihle sonyaka yihlobo, lapho ukushisa esikusebenzisayo, umjuluko uyasihlupha ngawo wonke amahora futhi-ke lokho esihlala sikubheka kwisiphunga esihle ukuthi ngaphezu kokuqeda iphunga ukuthi lawo mabala wezithukuthuku angabukeki esikhunjeni sethu, futhi futhi uma kungenzeka ukuthi isebenzisa izithako zemvelo, konke kungcono.
Besifuna ukubona ukuthi singakuthola konke lokhu ngokusha Sanex Natur Vikela, Isidambisi esisha sikaSanex, isithako saso impahla eyinhloko i-alum, amaminerali emvelo avela edwaleni lentaba-mlilo i-aluniferous elaphayo, elwa namagciwane futhi avumela isikhumba sethu ukuba siphefumule. Futhi, njengokusha, lo mkhiqizo omusha weSanex awunayo i-aluminium hydrochloride, lowo ophikisana nophefumula ongavumeli isikhumba sethu siphefumule, noma utshwala, noma ama-parabens. Futhi ungawabelana nomlingani wakho! Kuyiphunga elingu-unisex Kokubili ngefomethi yayo yokufafaza ne-roll-on.
ISanex ibisuselwa kulo mgomo osebenzayo obusetshenziswa kusukela ezikhathini zasendulo lapho abantu babemane bamanzise leli litshe le-alum balidlulise ngqo ngaphansi kwekhwapha ukuqeda leso sithukuthuku esingabukeki.
Ukuhlola ukusebenza komkhiqizo sisebenzise ifomethi ye-roll-on nesifutho sesikhumba esijwayelekile.
Esifuna ukukugqamisa ngalo mkhiqizo ukuthi iphunga lawo alinamandla nakancane, lishiya okumnandi ukuzizwa sisisha ekhwapheni lethu ngaphandle kokubangela iphunga eleqile lamakha. Asikakhombisi ukuthi ihlala amahora angama-24, ngoba ngalokhu kushisa nokuba ehlobo akunakwenzeka ukuthatha ishawa engaphezu kweyodwa nsuku zonke.
Uma ungomunye walabo abagunde amakhwapha, kungumkhiqizo ofanele, ngoba uyaphilisa lawo manxeba amancane ongawenza ngemuva kokuthambisa, ngaphandle kokulahlekelwa ukusebenza komkhiqizo.
Izame bese usitshela ngolwazi lwakho!
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Ukusebenza kweSanex Natur Protect entsha
Ngingathanda ukwazi ukuthi ngabe lesi siphikisi sisusa amakhwapha yini, ngoba ngifunde kwamanye ama-blog ukuthi itshe le-alum lisebenzela leyo nkinga, ngibafakile amabala futhi ngifuna umkhiqizo walokhu.
Itshe le-Alum liqaphele izimfanelo zokubulala amagciwane nezokuqothula.
Ukusetshenziswa kwayo okuyinhloko kunjenge-deodorant yemvelo. njengoba ivala izimbotshana, ilawula ukujuluka futhi inciphise iphunga elibi. Liyaphilisa, lilungele ukusetshenziswa ngemuva kokushefa, lithambisa isikhumba, lisibulale amagciwane, futhi ngomphumela walo wokuvimbela ukuvimbela ukuvela kwamanxeba, linciphisa ukopha futhi lisuse amabala 🙂 futhi longa kakhulu futhi lisebenziseka kalula, kwanele ngokumanzisa itshe, nokulidlulisa endaweni ezolashwa ngoba i-alum iyancibilika emanzini. Sithemba ukuthi sikusizile !!
Kudala ngisebenzisa i-Natur protect deodorant futhi kuhamba kahle kakhulu, ikakhulukazi kwabesilisa hehe. Abakwa-Alum bebengazi ngaphambili, futhi futhi, uma besusa izinto eziyingozi, kuzoba ngcono.
Futhi ayijuluki, iyasebenza, okungenani kimi.
UMaria José kusho
Engingakutusa i-Dove Dermo Aclarant® antiperspirant, ekhethekile ukukhanyisa isikhumba semakhwapheni, ibuye ishiye isikhumba sakho kahle kakhulu ngoba iqukethe ukhilimu othambisa, futhi yenziwa ngezithako zemvelo.
Phendula uMaria José
Sawubona!! Yebo, bengisebenzisa iSanex Naturprotect isikhashana, lena enekepisi elibomvana, futhi ngenza kahle impela ... okungenani angijuluki futhi okusho ukuthi, ngoba angikaze ngisebenzise isiqedaphunga ngaphezu Izikhathi ezi-2… ngicabanga kanjalo! Futhi ukuthi bafaka i-alum futhi basuse isithako samakhemikhali, kubonakala kubalulekile kimi.
I-crackberry, umlutha omusha
I-Trussardi 1911 Daily-Sebenzisa Ubhaka Wesikhumba